यस्ता लक्षण देखिएका छन् भने टुट्न सक्छ तपाईंको सम्बन्ध!
तपाईको जीवनमा पक्कै पनि त्यो समय थियो होला, जब पार्टनरको नजर निरन्तर तपाईमाथि पथ्र्यो । तर के अहिले त्यस्तो अवस्था बदलिसकिएको छ ? के अहिले उनी तपाईलाई प्रेमपूर्वक हेर्दैनन्हे-र्दैनिन् ? यदि अवस्था यस्तो हो भने तपाई सोच्नुहोस् कि अब तपाईको पार्टनरको मन बदलिसकिएको छ । तपाईको रिलेशन खतरामा छ ।
यौन उत्तेजना बढाउन भियग्रा